सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार पुग्यो -सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार पुग्यो -
८ असार २०७७, सोमबार १८:४७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । घरेलु बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेको हो ।
सुनको मूल्यमा वृद्धि, तोलाको कती पुग्यो ?
सनको मुल्य घट्यो, तोलाको कती पुग्यो ?
ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना थप गर्न माग